Vaovao - Arahabaina mafana ho an'i SHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD mandalo amin'ny fanamarinana ny ala FSC ary nankatoavina ny fanamarinana FSC vaovao.
Arahabaina mafana ho an'i SHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTD mandalo amin'ny fanaraha-maso ny fanamarinana ala FSC ary nankatoavina ny fanamarinana FSC vaovao.
Miarahaba anaoSHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTDMandalo amin'ny fanamarinana fanamarinana ala FSC ary ankatoavina amin'ny fanamarinana FSC vaovao.
Ny fanamarinana ala, fantatra amin'ny anarana hoe fanamarinana hazo, dia fitaovana ampiasaina amin'ny fomba fiasa amin'ny tsena hampiroboroboana ny fitantanana ny ala maharitra sy hanatrarana ny tanjona ara-tontolo iainana, ara-tsosialy ary ara-toekarena.Ho an'ny fanamarinana ala, ny iray dia afaka manatsara ny sehatry ny fampandrosoana ny orinasa, ny iray hafa dia ny hampitombo ny tombony amin'ny fifaninanana, amin'ny fanamafisana ny fitantanana fototra sy ny fitantanana ny tontolo iainana amin'ny orinasa mba hitazonana na hampitombo ny anjara tsena, raha afaka mamokatra vokatra samihafa, ny fahatelo dia hanatsarana ny endrika ara-tsosialy ny orinasa, hanampy ny orinasa hanitatra ny fantsona iraisam-pirenena, hahazo fanohanana bebe kokoa, ary fahefatra, hanamafy orina ny fitantanana fototra sy ny tontolo iainana fitantanana ny orinasa.
SHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTDdia toy ny orinasa FSC voamarina nandritra ny 9 taona mahery.
Ny fahombiazan'ny fahazoana mari-pankasitrahana FSC dia midika fa ny orinasa dia nandalo ny fitsipika sy ny fenitry ny tontolo iainana, ara-tsosialy ary ara-toekarena nofaritan'ny FSC, mametraka tahiry tsara amin'ny rojo famatsiana, mividy akora miaraka amin'ny marika fanamarinana FSC, aza mividy vokatra avy amin'ny hazo atahorana. karazana na fandripahana tsy ara-dalàna, ary manome toky ny mpanjifa fa avy amin'ny ala mahafeno ny filana ara-tsosialy, ara-toekarena ary ara-tontolo iainana ho an'ny taranaka ankehitriny sy ho avy ny vokatra, ary manohana ny Greenpeace ihany koa.
Mandritra ny fotoana ela,SHANDONG HUIYANG INDUSTRY CO., LTDmifikitra amin'ny foto-kevitra ny amin'ny fanaovana ny vokatra hazo sariaka kokoa ny tontolo iainana, ara-tontolo iainana, ara-pahasalamana, ny vokatra miaraka amin'ny kalitao tsara sy ny serivisy tsara, ankasitrahan'ny mpanjifa.
Amin'ny ho avy, ny orinasa dia hampivelatra mafy ny anton'ny fiarovana ny tontolo iainana maitso, ho an'ny fiarovana ny tontolo iainana mba hitondra ny heriny manokana.
Ny rojo fanaraha-maso ny orinasa dia mandrakotra ny vokatra isan-karazany, ny vokatra dia amidy ao an-trano sy any ivelany miaraka.
Amin'ny maha mpihazona ny mari-pankasitrahana FSC, dia miarahaba antsika namana sy mpanjifa rehetra manerana izao tontolo izao mba hijery ny mari-pankasitrahana FSC ao amin'ny tranokala ofisialin'ny FSC:http://info.fsc.org/.
© Copyright 20212023 : Zo rehetra voatokana.